पर्वत – पर्वतमा पहिलो पटक भेटिएको दुर्लभ वन्यजन्तु किङ कोब्रा अर्थात् कालीनागलाई संरक्षण क्षेत्रमा लगिएको छ । कुश्मा नगरपालिका वडा नं १० पीपलटारीस्थित सिमखेतमा गत शनिबार भेटिएको सर्प सर्प संरक्षक महेन्द्र कातिलाको पहलमा संरक्षण क्षेत्रमा लगिएको हो । संरक्षण सूचीमा रहेको अत्यन्तै दुर्लभ अनि संसारकै विषालु राजगोमन अर्थात् कालीनागले समेत
साप्ताहिक स्वदेशी राशिफल आज फागुन २५ गते देखी चैत्र १ गतेसम्मको, श्रीमनकामना माताले सबैको कल्याण गरुन
– ज्यो.प. सरोज घिमिरे मेष राशि – चु, चे,चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – यो साता गरीरहेको कार्य परीर्वतनको सम्भाबना रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय ब्यतित रहनेछ । आफुभन्दा सानाको सहयोगमा नयाँ कार्य थालनिको योग बन्नेछ । कला कौशलको प्रयोगले हरकसैलाईृ मोहित तुल्याउन सकिनेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा
५० वर्षपछि फ्लोरिडामा भेटियो विषरहित संसारमै दुर्लभ ”रेनबो सर्प”
संसारमै दुर्लभ रेनबो सर्प भेटिएको छ । लगभग ५० वर्षपछि अमेरिकाको फ्लोरिडामा रेनबो सर्प भेटिएको हो । ट्रेसी क्याथेन नामका एक पदयात्रीले ४ फुट लामो उक्त सर्पको तस्बिर खिचेका थिए । ओकला नेशनल फरेस्टको फेसबुकमा शेयर गरिएको उक्त तस्बिरमा रातो र पहेँलो रङको सर्प रेनबो सर्प भएको फ्लोरिडास्थित नेचुरल हिस्ट्री
श्री पाथिभरामाता मन्दिरको दर्सन गरि भोलि २०७६ साल फाल्गुन २८ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस ! तपाईको दिन शुभ रहोस् । मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) मामा तथा मावली पक्षबाट तपाईको काममा भरपुर सहयोग पाईने योग रहेकोछ । माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ भने पति पत्निबिच मायाको डोरो कसिनेछ । तपाईको कुभलो
भगवान शिवको उपासना गर्दा गर्न नहुने १५ गल्ती ! जानिराखौ
भगवान शिवको उपासना गर्दा हर प्रकारका कष्ट निवारण हुने तथा मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ ।शिव प्रसन्न भएमा जीवनमा कुनै संकट नआउने धार्मीक मान्यता छ । करौडौ श्रद्धालु हरेक दिन भगवान शिवको पूजाआराधना गर्दछन् ।तर शिवलाई प्रसन्न पार्ने नाममा कहिलेकाँही केहि विधि र सामग्रीमा ख्याल पुर्‍याइएन भने यसबाट शिवलाई
महिलाहरूले बिहान सबेरै उठेर यस्तो काम गर्दा चम्किन्छ तपाईको भाग्य,सुख,शान्ति छॉउछ परिवारमा !
तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने ब्रह्म मुहूर्तमा ओछ्यान छाड्नुहोस् ।यदी कोही व्यक्तिको कुण्डलीमा ग्रह सम्बन्धी कोही दोष भएमा भाग्यले साथ दिँदैन । कुण्डलीको दोषाबाट टाढा रहनका लागि ज्योतिष शास्त्रमा कयौँ उपाय अपनाउन सकिने शास्त्रले बताएको छ । शास्त्रमा भनिएको छ–वर्ण कीर्ति मन्ति लक्ष्मी स्वास्थ्यमायुश्च विदन्ति ।ब्राह्मो मुहूर्ते
मंगलबारको दिन भुलेर पनि गर्ननहुने यी पाँच काम जानिराखौ !
करोडौं सूर्यको जस्तो तेज भएका भगवान गणेश देवलाई आराधना गर्नाले बिघ्न बाधा र अधुरा काम पूरा हुन्छन् ।शास्त्रअनुसार मंगलबारको दिन गर्न केही काम गर्न बर्जित गरिएको हुन्छ । सोमबार, बुधवार र शुक्रवारलाई सोम्यबारको श्रेणीमा राखिएको छ भने आइतबार र बिहीबारलाई कडाबारको श्रेणीमा राखिएको छ । मंगलबार तथा शनिबार क्रुर अर्थात
सुत्ने कोठामा यी फोटोहरु राखेमा श्रीमान् श्रीमतीबीच सम्बन्ध प्रेममय बन्छ ! जानी राखौ
आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध सफल बनाउन श्रीमान् र श्रीमती दुबैको धेरै नै भुमिका हुन्छ । श्रीमान् र श्रीमतीले एक अर्कामा विश्वास नगरेमा सम्बन्ध राम्रो बन्दैन । त्यसैले श्रीमान् र श्रीमतीले एक अर्काको कुरा बुझ्नु जरुरी हुन्छ । यस्तै हामिले बास्तुशास्त्रमा पनि निकै बिश्वास गर्ने गर्छौ । बास्तुशास्त्रमा श्रीमान् र श्रीमतीबीचको सम्बन्ध
विश्व रहेका सबै जीवहरु बारे हामिलाई थाहा नहुन सक्छ । वैज्ञानिकले खोज गर्ने क्रममा धेरै अनौठा जीवहरु फेला पारिराखेका छन् । यसैक्रममा वैज्ञानिकले एक अनौठो जीव फेला पारेको बताइएको छ । त्यो अनौठो जीव पानीभित्र पाइने बताइएको छ । उक्त जीव दक्षिण पूर्व युरोपको देश बोस्निाया र हर्जेगोविनामा भेटिएको हो
हेर्दा वृद्ध जस्तै देखिने अनौठो बच्चीको जन्म !
बिश्वमा धेरै अद्भूत बच्चाको जन्म हुने गर्छ । धेरै आमाबाबुले सोच्नै नसक्ने अनौठो बच्चाको पनि जन्म दिएका छन् । यस्तै मुम्बईमा एक अनौठो बच्चा जन्मिएको छ । उक्त बच्चा हेर्दा वृद्ध जस्तो देखिन्छ । मुम्बईको अस्पतालमा जन्मिएकी बच्चीलाई देखेर आमा पनि अनौठो मानिन् । उनी दुध पिलाउन पनि डर मानिन्